ကြက်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ငှက်အဖြစ် ဘာကြောင့်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသလဲ? ကြက်အစား ခိုသားစားခဲ့ကြတဲ့ ဂျပန် !!! - JAPO Japanese News
လာ 06 Dec 2021, 16:30 ညနေ
သောက်ကြစားကြတဲ့အချိန်မှာ အတော်လေးတွေ့ရမှာက ဟောဒီ “ ယာခိတိုရိ” ကြက်ကင်ပါ။
နည်းနည်းပဲစားမယ်လို့စိတ်ကူးထားပေမဲ့၊ ဘယ်နှစ်ချောင်းမှန်းမသိအောင် စားမိလိုက်တယ်။
ကြက်သားက တကယ်အရသာရှိလို့ ကြက်ကင်နဲ့တွဲပြီး အရက်လည်းတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်သောက်မိကြပါတယ်။
အခြားသော Chicken Cutlet နဲ့ Oyakodon စတဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လည်း ကြက်သားကိုစားကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကြက်သားဟာ ဒီနေ့ခေတ်နဲ့အရင်အချိန် မတူခဲ့ဘူးဆိုတာကို သိကြပါသလား?
“ တိုရိနိခု” လို့ပြောလိုက်ရင် ကြက်သားကိုပြေးမြင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဆာမူရိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးခေတ်၊ အဲဒိုခေတ်နှောင်းပိုင်းအထိ “ တိုရိနိခု” လို့ပြောလိုက်ရင် ကြက်သားကိုပြောခြင်းမဟုတ်ခဲ့ပါ။
天岩戸 “ အမနော့အီဝတို” လို့ခေါ်တဲ့ နတ်ဘုရားတွေရဲ့ ဒဏ္ဍာရီလာအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါတယ်။
နောက်ဘက်အလယ်တည့်တည့်မှာရှိနေတာကတော့၊ နေရဲ့လူဇာတိဖြစ်တဲ့ 天照大神 “ အမတဲရစု အိုးမိခမိ” နတ်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဒဏ္ဍာရီအကြောင်းအရာကရှည်တဲ့အတွက် အတိုချုံ့ရရင်၊ ကျောက်တုံးများဖြင့် ပိတ်ထားသောနေရာမှာ ကောင်းကင်ကိုထိန်လင်းစေသော ကြီးမြတ်တဲ့နတ်ဘုရားဟာ ပိတ်ခံထားရပါတယ်။
ထိုနတ်ဘုရားရဲ့အလင်းဟာ အမှောင်ထုကို ပြင်ပလောကသို့ လွှင့်စင်သွားစေတယ်။
အခြားသောနတ်ဘုရားတွေဟာ Amaterasu Omikami ကိုအပြင်ခေါ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီး၊ နောက်ဆုံး ကျောက်တုံးပိတ်ထားတဲ့နေရာကနေထွက်လာတဲ့အချိန်၊ ဒီပန်းချီထဲမှာပါတဲ့ ကြက်ဟာ အာရုံဦးကိုအချက်ပြဖို့တွန်ခဲ့တယ်၊ ဆိုတဲ့ဒဏ္ဍာရီအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။
ကြက်ဟာ အာရုံတက်မှာ ကျယ်လောင်တဲ့အသံနဲ့တွန်ခြင်းဟာ ဒီအကြောင်းအရာကနေ အစပြုခဲ့တာလို့ပြောကြပါတယ်။
အဲ့ဒီကစပြီး၊ ကြက်ဟာ နတ်ဘုရားကိုအစေခံတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ငှက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပါတော့တယ်။
လူသားတွေဟာ ကြက်ဥကိုယူစားရုံသာမကဘဲ သတ်ပြီးတော့လည်းအသားကိုစားကြတယ်။
ဒါဆို ဂျပန်လူမျိုးဟာ ကြက်သားကိုလုံးဝမစားခဲ့ကြဘူးလား? လို့ဆိုရရင် အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့။
ကြက်သားကလွဲပြီး ကျန်တာကို “ 鳥肉 တိုရိနိခု” အဖြစ်စားခဲ့ကြပါတယ်။
လက်ရှိဂျပန်မှာတော့ ခိုသားကိုသိပ်ပြီးမစားကြတော့ပေမဲ့၊ ပြင်သစ်မှာတော့ ဒီနေ့ခေတ်အထိ ခိုသားကိုစားကြတုန်းပါ။
ဂျပန်မှာလည်း အကင်၊ အပြုတ် ပုံစံမျိုးစုံနဲ့စားခဲ့ကြပါတယ်။
濃漿（こくしょう） “ ခိုခုရှော”
ခိုသားကို နုပ်နုပ်စဉ်းပြီး မီဆိုနဲ့ဆာကေးဖြင့် ပြုတ်ထားတဲ့အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အစပ်အရသာပါအောင် နောက်ဆုံးမှာ ဂျပန်ငရုပ်ကောင်းကိုထည့်ပါတယ်။
羽節酒（はふしざけ） “ ဟဖုရှိဇကေး”
ခိုရဲ့အတောင်ပံကိုကင်ပြီး ဆာကေးထဲမှာစိမ်ပြီးစားရတဲ့အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Kotsuzake (အရိုးအရက်) အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ငါးပူတင်းရေယက်ကို မီးမြိုက်ပြီး ဆာကေးထဲစိမ်သောက်တဲ့ “ ဟိရဲဇကေး” ဆိုတဲ့အရက်မျိုး ယနေ့ခေတ်အထိရှိနေသေးပေမဲ့၊ “ ဟဖုရှိဇကေး” ဆိုတာလည်း ဒါနဲ့ဆင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
魚鳥味噌（ぎょちょうみそ） “ ဂရော်ချောမီဆို”
ခိုတစ်ကောင်လုံးကို အဖြူရောင်မီဆိုနဲ့ဆာကေးတို့ဖြင့် ရက်အနည်းငယ်ကြာပြုတ်ပြီးထောင်းပါတယ်။ ပြီးရင် ပဲငံပြာရည်နဲ့ထပ်ပြုတ်ထားတဲ့ အစားအစာပါ။ အတော်လေးအချိန်ပေးရတဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။
အခြားသော တိုက်ကြက်နဲ့ဘဲကိုလည်း စားကြတာမျိုးရှိပေမဲ့၊ ခိုတွေကများများစားစားပိုရတာကြောင့် ဟင်းပွဲအဖြစ်ချက်ပြုတ်ကြတာက ပိုများပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်က KFC သာပေါ်နေပြီဆို ခိုသားနဲ့လုပ်ကြမှာအသေအချာပါပဲ။
ကီမိုနိုခေတ်က နွေရာသီနဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ အဝတ်အစားတွေကို ဘယ်လိုဝတ်ခဲ့ကြသလဲ?
ဂျပန်မှာရှိတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း မိန်းမရင်သားမြို့ !!!
လမ်းပေါ်ကနေ ကမ္ဘာသို့တက်ခဲ့သူ Yuya Hasegawa (shoeshiner) !!!